ओलीको दौडधूप : ‘सत्ताको आयु बढाउने रणनीति’ | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← नेकपा (प्रचण्ड-माधव समूह)ले आज बुटवलमा विरोध सभा गर्दै
दिन्छु भनेकाले पैसा नदिएपछि धुर्मुस-सुन्तलीले बनाउन लागेको रंगशालामा कामदारलाई ज्याला दिनै हम्मे →
काठमाडौँ — संसद् विघटनपछि राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी दबाबको सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दौडधुप थप बढेको देखिन्छ । उनका गतिविधिसँगै अभिव्यक्तिहरूमा पनि उस्तै तीव्रता छ । राजनीतिक दल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, कानुनविद्, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीसम्मले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनिरहँदा उनी त्यसलाई ‘प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार र राजनीतिक निर्णय’ भन्दै तर्क पेस गरिरहेका छन् ।
संसद् विघटनपूर्व स्वास्थ्यको कारण देखाएर बैठकका लागि पार्टी कार्यालयसमेत नपुग्ने उनी अहिले दिनहुँजसो आफ्नो समूहका बैठक, भेला र प्रशिक्षणमा पुगिरहेका हुन्छन् । संसद् विघटनको आफ्नो कदमको प्रतिरक्षा गर्न जिल्ला–जिल्ला धाउँछन् । एउटै कार्यक्रममा घण्टौं सम्बोधन गर्छन् ।
संसद् विघटनको विरोध गर्नेलाई ‘देशद्रोही’ भनेर टिप्पणी गरेका उनका अभिव्यक्तिहरूलाई नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले मात्र नभई पूर्वप्रधानन्यायाधीश, कानुनविद्, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवासम्मले ‘अमर्यादित’ भनिरहेका छन् । तैपनि उनका अभिव्यक्तिको शैली उस्तै छ । यसबीच ‘जनयुद्ध’ लाई कुहिएको फर्सी भने तर पूर्वलडाकुप्रति अनौठो सद्भाव देखाएका छन् । प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका कालीबहादुर खामसहितका लडाकुलाई बालुवाटार बोलाएर उनीहरूका समस्या सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
ओलीले सोमबार पशुपतिनाथ मन्दिरमा गरेको ‘पञ्चामृत पूजा’ लाई पनि राजनीतिक वृत्तमा चासोपूर्वक हेरियो । देशको कार्यकारी प्रमुखले देश र जनताको सुखशान्तिको कामना गर्दै पूजा गरेको भनिए पनि विश्लेषकहरूले यसलाई असामान्य परिघटना मानेका छन् । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी–समानुपातिकताप्रति अनुदार रहेको आरोप लागेका ओलीले आफूमाथिको राजनीतिक दबाब र संसद् विघटनविरुद्धको आन्दोलनको विषय मोड्न ‘धार्मिक कर्म’ तिर हात हालेको उनीहरूको ठम्याइ छ ।
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलको बुझाइमा ओली सत्ता लम्ब्याउनकै लागि ‘असामान्य’ गतिविधि गरिरहेका छन् । ‘संसद् पुन:स्थापना भयो भने ओलीलाई अपदस्थ गर्छ । निर्वाचन भयो भने पनि विभाजित मन र पार्टी कसैले जितेको इतिहास छैन । पार्टी विभाजनमा उहाँसँग ४० प्रतिशत पनि छैन । त्यो नेताले बहुमत ल्याउँछ भनेर कसले पत्याउने ?’ उनले भने, ‘त्यसकारण अहिले जति सकिन्छ सत्ताको आयु बढाउने नै रणनीतिमा छन् । अहिले उनले प्रयोग गरेको हस्तिनापुरीको राज हो । भोलिको अवस्था चपरीमुनिको बास हो ।’
नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त ओलीका गतिविधिलाई राजनीतिक अवसरवादका रूपमा अथ्र्याउँछन् । ‘उहाँले पहिला ईश्वरका नाममा शपथ लिन मान्नुभएन । जुन अरू नेताहरूले पनि गर्नुभएको थिएन । अहिले पशुपतिनाथमा पूजाआजा गर्न जानु आवश्यक थियो वा थिएन ! यो अर्कै विषय भयो,’ उनले भने, ‘अघिल्लो दिन जनयुद्धलाई कुहेको फर्सी भन्नुभयो । भोलिपल्ट जनयुद्धका लडाकुलाई तिमीहरूको जिम्मा म लिन्छु, तिमीहरूले त्याग गर्‍यौ भनेर प्रशंसा गर्नुभयो । यो विशुद्ध राजनीतिक अवसरवाद बाहेक केही होइन ।’ तर अब ओलीका कुनै ‘अस्त्र’ले काम नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘संसद् पुन:स्थापना भए पनि नैतिक रूपले प्रधानमन्त्री रहिरहने अवस्था हुँदैन । चुनाव भइहाले पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुने कुनै सम्भावना देख्दिनँ,’ पन्तले भने ।
दाहाल–नेपाल समूहका नेता राम कार्की ओलीमा आफू ‘अतिमानव’ भन्ने सोच विकसित भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘ओलीको साख खुस्किराखेको छ तर पनि उनका भक्तहरूले नायक, राजनेता भन्दिएका छन् । उनी प्रशंसा मात्रै सुन्छन्, आलोचना सुन्न चाहँदैनन्,’ कार्कीले भने, ‘उनलाई म त सबै चिजको भण्डार बनेछु भनेजस्तो लागेको छ । त्यसले मान्छेलाई विस्तारै असाधारण व्यवहार गर्ने ठाउँमा पुर्‍याइदिन्छ । यो लक्षण धेरै नेतामा देखिन्छ । तर ओलीलाई यो रोगले गाँजेको छ,’
विश्लेषक पोखरेल ओलीले कमजोरी लुकाउन विभिन्न गतिविधि गरेको देख्छन् । उनी आक्रामक बन्नु नै प्रतिरक्षाको अचुक उपाय हो भन्ने सिद्धान्तमा चलेको पोखरेलको बुझाइ छ । ‘उहाँ राज्यको साधनस्रोत दोहन र शक्तिलाई दुरुपयोग गर ठाउँठाउँमा सभा–बैठक गर्दै हिँड्नु भएको छ । अरूलाई गालीगलौज गर्दै उखान–टुक्का हाल्दै हिँड्नु छ । यो आकाशतिर फर्केर थुकेजस्तै हो,’ उनले भने ।
पूर्वलडाकूदेखि पशुपतिनाथसम्मको शरणमा जानुले ओली आन्दोलनका शक्तिहरूसँग नमिल्ने, नझुक्ने तर आफ्नो स्वार्थका लागि जनमत सिर्जना हुने जुनसुकै काम गर्न तयार भएको देखिएको उनको भनाइ छ ।
पन्तको बुझाइमा ओलीले आफैंले घोषणा गरेको चुनावलाई हेरेर यी सबै गरेका हुन् । ‘उहाँ आफूले चुनाव घोषणा गर्नुभएको छ । चुनावलाई जे–जेले फाइदा पुग्छ भन्ने लागेको छ, उहाँ र उहाँको टिम तिनै गतिविधि गर्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।
कार्कीको बुझाइमा ओलीमा फाइदाका लागि जे पनि गर्ने सोच देखिएको छ । ‘द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई मान्ने मान्छे अहिले कसरी पशुपतिनाथमा लाखबत्ती बाल्न जान्छन् ? उनमा दार्शनिक बुझाइ कमजोर देखियो । अहिले जे गर्दा फाइदा हुन्छ, त्यही गर्दै छन् । भोलि धोती मात्रै लाएर जनै काँधमा हालेर हिँड्दा फाइदा हुन्छ भने त्यही गर्दिने हुन्छ,’ कार्कीले भने, ‘यस्तो गर्ने अपराधबोधले ग्रसित भएर हो । मैले प्रजातन्त्रको विरुद्ध अपराध गरेको छु भन्ने कारणले गर्दा पनि यस्तो हर्कत गर्न उनलाई उक्साएको छ ।’
पोखरेल आफ्नो कमजोरी लुकाउन ओली मर्यादा भुलोर आक्रमणमा उत्रेको बताउँछन् । ‘अहिले उहाँको आक्रामक शैली छ । त्यो उहाँ मानसिक रूपले कमजोर हुनुहुन्छ । कहीँ न कहीँ लघुताभास छ । त्यसलाई ढाकछोप गर्न ठूलठूलो स्वरमा सबैलाई गाली गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत जे–जे संविधानका मूल्य मान्यता छन्, अहिले त्यसका पक्षधर कोही पनि उहाँसँग छैनन् । उहाँ र उहाँको गुटबाहेक अरू छैनन् ।’
ओली समूहका नेता कर्ण थापा भने ‘षड्यन्त्रको राजनीति तोडेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्ने’ नेताको नाताले प्रधानमन्त्रीको सक्रियता जायज ठान्छन् । ‘नेपालमा षड्यन्त्रको राजनीतिको सिलसिला तोडेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्छु भनेर नयाँ कदम चाल्नुभयो । मूल नेताका हिसाबले उहाँको सक्रियता अपरिहार्य हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म उहाँका अभिव्यक्ति गलत छैनन्, तथ्यहीन छैनन् ।’ उनले माओवादी लडाकूहरुले नै जनयुद्धलाई कुहिएको फर्सी भनेको दाबी गरे । ‘जनयुद्ध सफल नभएकै हो । राज्यले ढाडस दिनुपर्छ, संरक्षण दिनुपर्छ भनेर केपी ओलीले भन्नु भएको हो,’ उनले भने, ‘ओलीले नेपालको राजनीतिमा कोर्स करेक्सन गर्नुभएको हो ।’
तर, विश्लेषक पोखरेल ओलीले अहिले आफू बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री भएको दम्भ राखे पनि पार्टीभित्र बहुमत गुमेपछि संसद् विघटन गरेको र अहिले गुट बलियो बनाउन लागेको बताउँछन् । उनले भने, ‘पार्टीका बहुमत सांसद आफ्नो विपक्षमा छन् भन्ने तथ्य आइसकेपछि उहाँले संविधानविपरीत हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै संसद् विघटन गर्नुभयो । यो भनेको आफ्नो शासनको आयु बढाउने र त्यहाँ बसेर गुटलाई बलियो बनाउने नै हो ।’(कान्तिपुर )